နူးဖို့နပ်ဖို့မအား – Grab Love Story
by phyu May 10, 2021
အသုဘ တစ်ခုတွင်… ဟီး……ဖေဖေနဲ့မေမေ သမီးတို့ကိုထားခဲ့ပြီလား။ ဟီး..မမ မေမေတို့ကိုခေါ်ပါဦး။ မေမေ ဖေဖေ ထပါဦး သားတို့ကို ကျောင်းလိုက်မပို့တော့ဘူးလား။ ဒေါ်စန်းတင်မှာ မိမိ၏တူမနဲ့တူနှစ်ယောက်ကို ဖက်ထားရင်း ညီမလေးရေ၊ မောင်လေး အဖြစ်ဆိုးလှချည်လား။ ညီမလေးတို့ရဲ့ နင်တို့သားသမီးတွေကို ဒီအတိုင်းထားသွားတော့မှာလား။ ရပါတယ် ညီမလေးတို့ ငါ့တူ၊တူမတို့ကို ငါသားသမီးလို့ ပြုစုစောင့်ရှောက်ပြီး မွေးစားမယ်။ ညီမလေးတို့ ကောင်းရာသုကတိလားပါစေ။ သားတို့သမီးတို့ အားမငယ်ကြနဲ့ အရီးတစ်ယောက်တစ်ယောက်လုံးရှိတယ်။ ဒါဟာ ဖိုး၈ျမ်းရဲ့ ဘ၀အပြောင်းအလဲတစ်ခုပါ။ ဖိုးဂျမ်း အသက်၁၀နှစ်သားမှာ မိဘနှစ်ပါးက ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ပြီးဆုံးသွားတယ်။ ဒါကြောင့် အဒေါ်ဖြစ်သူက မျက်စိသူငယ်နားသူငယ်နဲ့ကျန်ခဲ့တဲ့ တူနဲ့တူမတို့ကို မွေးစားလိုက်သည်။ ကျောင်းကိုလည်းဆက်လက်ထားပေးသည်။ ဖိုးဂျမ်းရဲ့အစ်မနာမည်မှာ မဠေးယဉ်ဖြစ်ပြီး သူထက်၅နှစ်ကြီးသည်။ အဒေါ်ဖြစ်သူဒေါ်စန်းတင်မှာလည်း သမီးတစ်ယောက်ရှီသည်။ သမီးနာမည်မှာ မခင်ငြိမ်းလတ်ပါ။ မဠေးယဉ်ထက်နှစ်နှစ်ကြီးသည်။ ဖိုးကြမ်းကိုမွေးစားစဉ်က ဒေါ်စန်းတင်အသက် ၅၀ရှိပြီ။ အိမ်ထောင်နှစ်ဆက်ကျဖူးပေမယ့် သမီးတစ်ယောက်သာထွန်းကားခဲ့သည်။ လင်သားဆုံးတာ ၇နှစ်ရှိပြီးမို့ သမီးလေးနဲ့သာကျန်ခဲ့သည်။ ခုတော့ ညီမဖြစ်သူ ဆုံးတော့ ကျန်ရှိတဲ့တူနဲ့တူမကို မွေးစားလိုက်ခြင်းပင်။ အဒေါ်က မွေးစားတာဆိုပေမယ့် အဒေါ်ကို အမေလို့မခေါ်ပေ။ ခေါ်နေကျ အရီးလို့ နှုတ်ကျိူးနေပြီးဖြစ်သည်။ ဖိုးဂျမ်းလူပျိူပေါက်အရွယ်ကတည်းက ဂွေးထုတတ်ပြီးဖြစ်သည်။ သူဂွေးထုပြီးဆိုရင် အရင်ဦးဆုံးအမှန်းခံရသူကတော့ သူ့ကိုအမြဲအလိုလိုက်သူ အဒေါ် ဒေါ်စန်းတင်ပါပဲ။ အဒေါ်ရဲ့အချော့အမော့၊အထိအတွေ့တွေဟာ လူပျိုပေါက်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါ စွဲလမ်းမှုတစ်ခုကိုဖြစ်ပေါ်စေတာ ဖြစ်တယ်။ ကျောင်းပြီးတော့ သင်တန်းတွေဘာတွေတက်ပေါ့။
အဒေါ်က ရုပ်ရည်ကျသွားပါပြီး။ မကျတာက တင်ပါးနှစ်ဖက်သာဖြစ်သည်။ ပါရည်နားရည်တွေတွန့်သွားပြီးဆိုပေမယ့် ဖင်တုံးကြီးက ကြီးဆဲပင်။ မန္တလေးမှာနေကြသူတွေမို့ သင်တန်းကလည်း သူတို့နဲ့သိပ်မဝေးပါ။ ဖိုးဂျမ်းက သင်တန်းကို ဆိုိင်ကယ်နဲ့သွား ညနေပြန်လာ လုပ်သည်။ အဒေါ်က ကုန်စုံဆိုင်ကြီးတစ်ခုဖွင့်ထားသည်မို့ မနက်ဆိုရင် အစ်မဖြစ်သူ မဠေးယဉ်က ဈေးသွား၊ မခင်ငြိမ်းလတ်က ဆိုင်ဖွင့်ပြီး အဒေါ်က ဖိုးဂျမ်းစားချင်တာကို ချက်ရေကျွေးတတ်သည်။ သားဆိုလို့ ဒီတစ်ယောက်တည်းရှိတာမို့ အလိုလိုက်သည်။ အရီး… ပြောစေ ဘာဟင်းချက်လဲ။ သား ကြိုက်တဲ့ စာကလေးကြော်ရယ်၊ ရုံးမတီသီးဟင်းရယ် ပြီးတော့ ဒါမှတို့ အရီး။ အဒေါ်ဖြစ်သူစကားမဆုံးသေး အဒေါ်ကိုအနောက်ကနေပြေးဖက်ထားသည်။ အဒေါ်ဖင်အကွဲနှစ်ခုနဲ့ အတွင်းခံကိုအံတုပြီး ခုံးခုံးကြီးဖြစ်လာတဲ့ လီးကျောရိုးမှာ ထိကပ်နေသည်။ ပထမ အဒေါ်ခဏငြိမ်နေပြီးမှ သား..ဖယ်ဦး အရီး လုပ်စရာရှိသေးတယ်။ ဟုတ်ကဲ့ အရီး ဖိုးဂျမ်းမှာ အဒေါ်နဲ့ခွာလိုက်ပြီး သား ဘာကူညီပေးရမလဲ မလိုပါဘူး သားရယ်၊ သားက တစ်ခုပဲလုပ်ပေး အရီးချက်ကျွေးတာကို စားရုံပဲ။ ဟုတ်ကဲ့…စားမယ်အရီး..အရီးဘာကျွေးကျွေး အမယ်.. အဒေါ်က ပြုံးလိုက်ပြီး တူတော်မောင် ဖိုး၈ျမ်းအတွက်သင်တန်းမှာ စားဖို့ ပြင်ပေးသည်။ အမှန်တော့ စာကလေးကြော်ကို ဖိုးဂျမ်းက မကြိုက်ပါ၊ ဂွေးထုတတ်အချိန်းကစပြီး ကြိုက်သွားတာဖြစ်သည်။ ဖိုးဂျမ်းလိုချင်တာမှန်သမျှ လုပ်ပေးတတ်သဖြင့် ဖိုးဂျမ်းမှာ အဒေါ်ဖြစ်သူကို ကြိုက်ပြီးရင်းကြိုက်ဖြစ်နေသည်။ စကားသာပြောတာ ဖိုးဂျမ်းရဲ့မျက်လုံးကတော့ အဒေါ်ဖြစ်သူရဲ့ ဖင်ကနေ မခွာပေ။ ဆိုင်ကိုတော့ သမီးနှစ်ယောက်က ရောင်းသည်။ ကုန်ပစ္စည်းတွေကုန်သွားရင်တော့ ဖိုးဂျမ်းက အဒေါ်နဲ့အဖော်လိုက်ပြီး ကူဝယ်ပေးရသည်။ ဖိုးဂျမ်းမှာ အဒေါ်ကို ကြံဖို့ အားခဲပေမယ့် အခွင့်မသာပေးသဖြင့် ငြိမ်နေရသည်။ တရက်မှာ အဒေါ်ဖြစ်သူက သား..နက်ဖြန်အားလား၊ သင်တန်းရှိသေးလား ဘာလို့လဲ အရီး သားကိုဘာခိုင်းစရာရှိလို့လဲ။ သြော်…သားအားရင် သားကိုလိုက်ပို့ခိုင်းမလို့၊ နယ်ဘက်မှာ အရီး အလှူသွားစရာ ရှိတယ်။ ဟုတ်လား အရီး..သားအားပါတယ်။ နက်ဖြန် သင်တန်းပိတ်တယ်။
ဆရာခရီးသွားနေလို့ ဟုတ်လား အဲဆို အရီးကို လိုက်ပို့ပေးနော် အရီးရယ်..သားကလိုက်ပို့ပေးချင်တာပါ ဖိုးဂျမ်း တွေးမိသည်။ နယ်ကဆိုတော့ ခရီးဝေးမှာပဲ အရီးကိုကြံဖို့ အချိန်အများကြီးရတာပေါ့။ ဒီတခါအရီးကို ရအောင်ကြံမယ်။ ဒီအခွင့်အရေးကို လက်လွတ်လို့ မဖြစ်ဘူး။ အရီးက ငါ့ကိုချစ်တာပဲလေ။ သူငါ့ကို စိတ်ဆိုးမှာမဟုတ်ဘူး၊ အိမ်မှာက အစ်မတို့ရှိနေလို့သူက အခွင့်မပေးတာနေမယ်။ အေး..သား ဒါဆိုရင်တော့ အရီး တက်ဆီမခေါ်တော့ဘူး။ ဟုတ်ကဲ့ အရီး.. မိုးလင်းတော့ တူသားနှစ်ယောက် ပြင်ဆင်စရာရှိတာ ပြင်ဆင်ပြီး ထွက်လာသည်။ အလှူအိမ်ရောက်တော့ အလာဘသလာဘ စကားတွေပြော စားသောက် ကိစ္စတွေပြီးတာနဲ့ ခဏနားပြီးထွက်လာကြသည်။ အနည်းငယ်ပင် နောက်ကျနေပြီး။ သား မြန်မြန်လေးမောင်းနော် ဟုတ်..အရီး အရီးကို ဘယ်လိုကြံရင်ကောင်းမလဲ။ အာ..ဟုတ်ပြီး။ အမြန်မောင်းရင်း ဆိုင်ကယ်ကို လေဘာလျှော့ပြီး ရပ်လိုက်သည်။ သား..ဆိုင်ကယ် ဘာဖြစ်လို့လဲ။ မသိဘူး အရီး မောင်းရင်းနဲ့ရပ်သွားတာ ခက်တော့တာပဲ၊ မိုးကတော့ ချူပ်တော့မှာပဲ သား ခဏကြည့်လိုက်မယ် အေး..သား ဆိုင်ကယ်ပေါ်က ဆင်းလိုက်ပြီး ဖိုးဂျမ်း ဟိုကြည့်ဒီးကြည့်နဲ့ အချိန်ဆွဲနေသည်။ အဒေါ်မျက်နာမှာတော့ မိုးချူပ်မှာစိုးရိမ်သောအရိပ်အရောင်တွေတွေ့နေရသည်။ ခဏကြာတော့မှ ရပြီး အရီး အရီးရဲ့မျက်နာညိုးနေတော့ စိတ်ထဲမကောင်း ဟုတ်လား ဆိုပြီး အဒေါ်ဖြစ်သူမျက်နာကြည်လင်သွားသည်။ အဲဆို မြန်မြန်မောင်းတော့သား မြန်မြန်မောင်းပါဆိုတော့မှ ဖိုးဂျမ်းစိတ်လေးနေသည်၊ သူ့စိတ်ဆန္ဒကိုသူဖြည့်ဆည်းချင်သည်။ အခွင့်အရေးကိုလည်း လက်လွတ်မခံချင်။ အဲဒါနဲ့ သူဖြေးဖြေးလေးမောင်းရင်းပြောသည် ဆိုင်ကယ်က အရင်လိုမမြန်တော့ဘူး အရီး။ ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးဆိုပြီး ပြင်ဆိုင်ရောက်ဖို့လိုသေးတဲ့အချိန်မှာ သူရပ်လိုက်ပြန်သည်။ ရပ်သွားပြီးအရီး..သားထပ်စစ်ဆေးကြည့်မယ်။ ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူး။ အဒေါ်က ဆိုင်ကယ်အကြောင်းနားမလည်လို့သာ သူရဲရဲလုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ခဏဆင်းကြည့်ပြီး စတပ်ကြိုးကို ခိုဖြုတ်လိုက်သည်။ ဆီမလိုက်အောင်လုပ်လိုက်သည်။ပြီးမှ သား..စက်နိုးကြည့်မယ်။ မရဘူးအရီး ဟိုနားမှာ ပြင်ဆိုင်ရှိတာပဲလေ၊ အဲဒီကို တွန်းသွားပြီး ပြင်ကြမယ်လေ အေး..ဟယ်…မတတ်နိုင်ဘူး မောင်ဂျမ်းရေ နေတောင်ဝင်သွားပြီး..မိုးချူပ်ပါပြီး ဒီတခါ အရီး..စိုးရိမ်တယ်။
စိုးရိမ်တာပေါ့ မိုးချူပ်တာက အန္တရာယ်များတယ်။ သား တစ်ယောက်လုံးရှိတာကို အရီးရယ် ဘာစိုးရိမ်စရာရှိလဲ သားရှိပေမယ့် အန္တရာယ်က ပြောလို့မရဘူး စိတ်ချပါ အရီးရယ် ဘယ်သူမှ အရီးကိုမလုပ်စေရဘူးအတွေးထဲတော့ သားပဲလုပ်မှာလို့ပြောနေမိတယ် ဟမ်…ပြင်ဆိုင်ရောက်တော့ မိုးချူပ်ပြီ။ ပြင်သူက ကြည့်လိုက်တော့ ဟိုဟာဖြစ်တာ၊ဒီဟာဖြစ်တာဆိုပြီး ဖြုတ်ထားတာတွေကို ပြန်တတ်တာ ကဲ..ရပြီးဗျား ဟုတ်ကဲ့… ရပြီး အရီး… ရလည်း ဘာထူးမှာလဲသားရယ်။ မိုးပဲချူပ်နေပြီးကို၊ ပုံမှန်လေးပဲမောင်းတော့ အန္တရာယ်ရှိတယ်။ ဟုတ် အရီး ဆိုင်ကယ်မောင်းနေရင်း အရီးကို ဘယ်လိုဖန်ရမလဲမသိဘူး။ ကျောခုံးမှာ ထိကပ်နေတဲ့နို့ကြီးနှစ်လုံးကို စိတ်ထဲမှာမှန်းဆမိသည်။ အရီးက အရွယ်ရှိတုန်းဆိုရင် နို့ကြီးကြီးမှန်း မှန်းဆမိကာ လီးတောင်လာသည်။ တခါမှလည်း အတည်ကြီးမလုပ်ဖူးတော့ ဘယ်ကစလို့စရမှန်းမသိ လီးကတောင်းဆိုနေပြီး ထိုအချိန်မှာပဲ ကျေးဇူးရှင်မိုးမင်းကြီးက ဖိုးဂျမ်းကို သနားသွားလားမသိ မိုးရွာလာသည်။ မိုးရွာလာတော့ အ၀တ်တွေအနည်းငယ်စိုနေပါပြီး သား…ဟိုထန်းပင်အအောက်မှာ မိုးခိုရအောင်၊ မဟုတ်ရင် အရီးတို့ စိုကုန်လိမ့်မယ်။ ဟုတ် အရီး… ထန်းပင်အောက်မှာ မိုးခိုရင်း အရီးက ချမ်းလာသည်၊ ဒီအချိ်န်မှာ ဖိုးဂျမ်းအတွက်တော့ အခွင့်ကောင်းပဲ။ အရီးကို နောက်ကနေဖက်လိုက်သည်။ အရီးချမ်းနေတယ်မလား၊ သားဖက်ထားပေးမယ် ရတယ်သား မဖက်နဲ့ အရီးတောင့်ထားနိုင်ပါတယ်။ သားကြောင့်အရီး ခုလိုဖြစ်ရတာလေ။ သားသာဆိုင်ကယ်ကို သေသေချာချာ စစ်ထားရင် ခုလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ ဖက်ထားပေးမယ်။ ပထမ ဖိုးဖွဖွလေး ဖက်ထားပြီး နောက်တော့ တဖြေးဖြေးနဲ့ တင်းလာသည်။ အဒေါ်ဖြစ်သူမှာ သားက သူ့ကိုအရမ်းချစ်လို့ ကူညီတာ ထင်ပြီး ဘာမှမငြင်းသေး နောက်တော့ ဖိုးဂျမ်းလက်က သူ့နို့အုံ နှစ်ဖက်ကို ပွတ်နေသည်ကို သိရသည်။ သား…ဒါ ဘာလုပ်တာလဲ သား…အရီးကို ချစ်လို့ပါ။ သား…ငါက နင့်အဒေါ်နော် ဟုတ် သားသိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သားက အဲအဒေါ်ကိုပဲချစ်တာ မဖြစ်ဘူးနော် သား ဖယ်စမ်း… ဖိုးဂျမ်းက ပိုတင်းကြပ်စွာ ညာလက်နဲ့ အဒေါ့ကိုပိုက်ထားပြီး ဘယ်လက်မှာကားအဒေါ်ရဲ့ထမိန်ကို လန်လိုက်သည်။
ခနလောက် ပင်တီပေါ်က အဒေါ့်တင်ပါးကို ပွတ်ပြီး နောက်တော့ ပင်တီကိုစောက်ပဖယ်ကာ လီးကို အဒေါ့်စောက်ဖုတ်ဝတေ့ကာ ဖိသွင်းလိုက်သည်။ စပမှာကား ကျပ်နေလို့ အသံတောင်မမြည်ပေ။ သို့ပေမယ့် ဖိုးဂျမ်း လိုးထည့်လိုက်သော အရှိန်ကြောင့် ဖတ်ကနဲ အသံထွက်လာသည်။ အဒေါ်ဖြစ်သူ ငိုနေသည်။ ၁၇နှစ်လောက် လီးနဲ့မတွေ့ခဲ့ရတဲ့ အဒေါ့စပမှာ ကျုံ့သွားပြီးခါမှ လီးနဲ့တွေ့လို့ နာနေတာလားလဲမသိ။ ကိုယ့်တူက ကအမှားကြီးကို ကျူးလွန်နေလို့ ၀မ်းနည်းတာလားလဲမသိပါ။ ဘာဆိုဘာမှ ဖိုးဂျမ်းမသိတော့ပါ။ ကာမအမှောက်စိတ်တွေဖုံးကာ အဒေါ်ရဲ့စပကို..အားရအောင်သာ တဖွတ်ဖွတ် တဖတ်ဖတ်နဲ့လိုးပြစ်သည်။ ငါးမိနစ်ခန့်ကြာတော့ အရီးရဲ့စပလည်းအရည်တွေရွှမ်းကာ စီးကျလာသည်။ ဟင်း ဟင်း အဒေါ်ရဲ့ငိုသံတွေ ဆိတ်ငြိမ်သွားပြီး ညီးသံလေးထွက်လာသည်။ ဘာရယ်မှန်းမသိ ခုန တွေးနေမိသည်မှာ “ဖိုးဂျမ်း ခွေးကောင်၊ ခွေးစိတ်မွေးတဲ့အကောင် ကိုယ့်အဒေါ်ကိုတောင် ပြန်လိုးတဲ့ ခွေးတိရိစ္ဆာန်ကောင်” စသဖြင့် စိတ်ထဲမှာ အမျိုးမျိုးဆဲနေမိသည်။ ခုတော့ ဟင်း ဟင်း သား.. ကောင်းတယ်လို့ ပြောမိတော့မလို့ မိမိနှုတ်ကို မိမိပြန်ပြီးထိန်းလိုက်သည်။ ဘာလို့ဆို ခုနပဲစိတ်ထဲမှာ ဆဲချင်သလိုဆဲနေသည်မဟုတ်လား။ အ..အ..ဖွတ် ဖွတ် ဖတ် ဖတ် အရီးတင်ပါးနဲ့ တူသားဆီးခုံတို့ရိုက်ခတ်သံများ မြန်သထက်မြန်လာ သည်။ အစက အဖုတ်ထဲ ၀င်သွားသောလီးမှာ စကားမပြောတတ်တော်လည်း ခုတော့ အဒေါ့ရဲ့စောက်ရည်များကြောင့် အ၀င်အထွက်များ အဆင်ပြေချောမွေ့ကာ တဖလုလုနဲ့မြည်နေသည်။ အဒေါ်ဖြစ်သူ ဒေါ်စန်းတင်မှာလည်း အကောင်းကြီးကောင်းနေသည်မို့ တဟင်းဟင်းနဲ့သာ ညီးနေတော့သည်။ ဆယ်ငါးမိနစ်ကြာသွားတော့ အဒေါ်လည်း သားရေ အရီး မင်းကို ခွေးလို့ပြောမိတာ ခုအဒေါ်လည်းခွေးစိတ်ဝင်နေပြီး လွတ်ကောင်းနေတယ်။ အား…….. ကောင်းလိုက်တာ အရီးရယ်။ အရီးရော ကောင်းလား ဟွန်း… အဒေါ်ဖြစ်သူမှာ တူတော်မောင်ကို မျက်စောင်းထိုးပြီးတော့သာ ကြည့်လိုက်သည်။ အဒေါ်ရောသူပါ ကာမအထဋ်အထိတ်သို့ရောက်ပြီး သုတ်ရည်များကို အဒေါ့်ရဲ့စပထဲသို့ ပန်းထုတ်လေတော့သည်။
ဒီအဖြစ်အပျက်က ဖိုးဂျမ်း အသက်နှစ်ဆယ်အရွယ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အဲအချိန်မှာ အဒေါ့အသက်က ၆၀ပြည့်ပြီးဖြစ်တယ်။ ဖိုးဂျမ်းမှာ မိမိအရမ်းလိုးချင်တဲ့ မိမိအဒေါ်ကို အားရပါးရလိုးလိုက်ရတဲ့အတွက် အားရကာ အကျေနပ်ကြီးကျေနပ်လျှက်သာ… နောက်နေ့ကျတော့ အဒေါ်ကဖြစ်သူက လုံးဝအကပ်မခံတော့ပေ။ ဒေါ်စန်းတင် မိမိကိုယ် မိမိထိန်းနေခြင်းသာ။ ကာမအရာသာကို မေ့ပစ်ပြီး အိပ်ပျော်နေတဲ့ မိမိစပကို တူတော်မောင်ကြောင့် တရေးနိုးလာသလိုမျိုး ထိုအရသာကို လှုပ်ရှားတောင်းတလျက်သာရှိတော့သည်။ ထို့ကြောင့် ကြာကြာမရှောင်နိုင်ပေ။ တူတော်မောင်ကိုလည်း ဟန်တောင်ြ့ပီးပိုးစိုးပက်စက်မပြောရဲ့။ ကာမအရသာကို လူတချို့က နတ်ဘုံဟုတောင်တင်စားကြသည်မှာ လိုတောင်လိုလေဦးမည်။ ကာမဂုဏ်ရဲ့အရသာဟာ လိုက်စားလျှင်လိုက်စားသလို စွဲလမ်းစေတတ်သည်။ အသက်ကြီးလို့ ထိုစိတ်ကုန်ခမ်းတာမျိုးမဟုတ် ထိုစိတ်ကိုလိုက်စားပါက အဘွားကြီးလည်းကြိုက်နှစ်သက်သည်။ ဒေါ်စန်းတင်မှာ မိမိစိတ်ကို မိမိသိနေသဖြင့် တူတော်မောင်ကို အဝေးပို့ဖို့ တွေးလေတော့၏။ မဖြစ်ဘူး မဖြစ်ဘူး ဒီကောင်လေးက ကြာလာရင်ပိုပိုကဲလာမှာပဲ။ ပြီးတော့ ငါကိုယ်တိုင်ကလည်း သူ့အသားနဲ့ထိရင် သာယာနေတယ်။ ဒီနှစ်လည်းနှစ်ကုန်ခါနီးပြီး သူ့သင်တန်းပြီးတာနဲ့ ငါ့အကိုဝမ်းကွဲရှိတဲ့ နိုင်ငံခြားကို ပို့ထားရမှာပဲ..ဟူး အမလေး… အရီး ဘာလို့လန့်နေတာလဲ။ သြော်…နင်က အသံမကြားဘာမကြားနဲ့ နောက်ကလာဖက်တာကိုး။ အရီးက ဘာတွေးနေလည်းမှ မသိတာ။ ပြောဦး ကျွန်တော့လီးကောင်းတဲ့အကြောင်းကို တွေးနေတာမလား။ ဖယ်စမ်း..ငါ နင့်ကို အလုပ်လုပ်ခိုင်းမလို့။ ဒီးသင်တန်းပြီးရင်။ တကယ်လား အရီး။ အဲဆိုရင်တော့ အရီး စပကို သားလွမ်းနေတော့မှာပဲ။ ဟဲ့..စကားတိုးတိုးပြော နင့်အစ်မတွေ ကြားသွားရင် နင့်ကို ငါလုပ်ခွင့် မပေးတော့ဘူးနော် အိုး…အစ်မတို့မကြားရင် သားကိုလုပ်ခွင့်ပေးမယ်ပေါ့ အဲ..အဲဒါ အရီးယောင်သွားလို့။ အရှက်ကွဲမှာကိုပြောတာ ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် အရီး ပြောပြီးပြီး ကတိတည်ရမယ်။
လူကြီးဖြစ်ပြီးတော့။ ကျွန်တော်လီး အရမ်းတောင်နေတယ် အရီး။ စုပ်ပေးပါလား။ ဒီကလေးတော့ အရီး မြန်မြန်လုပ်နော် မမတို့ပြန်မလာခင် မြန်မြန်လုပ်ပေး ခက်ပြီး မခက်ဘူး လွယ်လွယ်လေး။ ဒီမှာ သားလီးကို အပြင်ထုတ်ထာြး့ပီးသား။ ပါးစပ်လေးကိုဟ ပြီးရင် လီးကို ငုံလိုက်ပြီး ပလွေပေးရုံလေးပဲ။ ဒေါ်စန်းတင်မှာ သူ့တူလီးကိုမြင်တော့ မနေနိုင်တော့ဘူး။ ကိုင်လိုက်ပြီး အားရပါးရစုပ်ကာ ပလွေပေးနေမိသည်။ ပျု ပျု..စုပ်ချက် မြည်သံ စုပ်နေရင်းခဏကြာတော့ တူတော်မောင်မှာ မမ မမ ခင် လို့ရေရွတ်လိုက်လို့ အရီးလည်း ကောက်ထကာ ဆိုင်တံခါးဝသို့ မျက်နာမူလိုက်သည်။ အမှန်တော့ သမီးနှစ်ယောက်က သွားစရာပေါ်လာလို့ ဆိုင်ထဲမှာ ဒေါ်စန်းတင်က ဆိုင်စောင့်ရခြင်းဖြစ်သည်။ တူတော်မောင်ရောက်လာတော့မှ ဘာညာကွိစိကွစ ဖြစ်ပြီး သမီးခင်ငြိမ်းလတ်က ရုတ်တရက်ပြန်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ခင်ငြိမ်းလတ် ၀င်လာတော့ တူသားနှစ်ယောက်မှာ ဘေးချင်ယှဉ်လျှက်… မမ ပြန်လာပြီလား။ဖိုးဂျမ်းရဲ့ညာလက်မှာကား အဒေါ်ဖြစ်သူ ဖင်ကိုနှိုက်လျှက်သား.. သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ရှေ့မှာ ရောင်းကုန်ထည့်ထားတဲ့ ဗီဒိုရှိလို့ သူတို့အောက်ပိုင်းကို မမြင်ရပါ။ အေး မောင်လေး။ မမရော.. နင့်မမက သူ့ကိစ္စနဲ့သူ ကျန်ခဲ့တယ်။ သြော်… ဖိုးကြမ်းမှာ မမကိုပထုတ်လိုက်ဟုသောသဘောနဲ့ အဒေါ်ဖြစ်သူကို မျက်စပစ်လိုက်တော့ ဒါနဲ့ သမီး ဦးမြင့်ဆီ အကြွေးတောင်းပြီးပြီးလား။ ပြီးပြီး မေမေ ဦးလှမိုးရော အဲဒါလဲ ပြီးပြီး မစန်းကြည်.. အဲဒါတော့ မပြီးသေးဘူး။ ဟူး တော်သေးတာပေါ့ မစန်းကြည်ကယ်လို့ ဒါနဲ့ အဲဒါက မေ့မေ့ကို လာချေးတာမလား။ အေး ဟုတ်တယ်။ သမီး မေမေ့ကိုယ်စား သွားတောင်းလိုက် ဟုတ်…သြော်..ညနေကျမှ သွားတောင်းလို့ မရဘူးလား မေမေ။ မရဘူး အဲဒီ မိန်းမက ခုတလော ညနေဘက်အိမ်မကပ်ဘူး။ ခုသွားတောင်းလိုက် ဟုတ်ကဲ့ မေမေ ခင်ငြိမ်းလတ် ထွက်သွားတော့မှ ဖိုးဂျမ်း သူ့အဒေါ်ထမိန်ကို အမြန်လန်ပြီး ပင်တီကိုချွတ်ကာ အဒေါ်ခါးနှစ်ဖက်ကိုကိုင်လိုက်တော့ အဒေါ်က အလိုအလျှောက်လေးဘက်ကုံးဖြစ်သွားသည်။ ပြီးတာနဲ့ စပအ၀ကိုလီးထိတ်တေ့ပြီး ဖိသွင်းလိုက်သည်။ အ… ပြီးတာနဲ့ တရစပ်လိုးပစ်လိုက်တော့သည်။
ခိုးစားတာမို့ နူးဖို့နပ်ဖို့ မအားပေ။ လိုးချက်တွေများလာပြီး အရှိန်တက်လာမှ ဆိုင်ထဲကို တစ်ယောက်ယောက်ဝင်လာသည်။ အမြန်ပဲအဒေါ်ကို အသိပေးပြီး သူ့အပေါ်ပိုင်းမှာ အင်္ကျီမချွတ်ထားသဖြင့် ဘေးစောင်း ဟန်အနေအထားနဲ့ လက်တန်ထောင်ကို ဗီဒိုပေါ်တင်လိုက်ပြီး မမပြန်လာပြီးလား အင်း မောင်လေး။ ဒါနဲ့ အရီးရော အရီးက အိမ်ထဲမှာ။ အစ်မဖြစ်သူ ၀င်လာမယ်လုပ်တော့။ မ၀င်နဲ့ဦးအစ်မ ဘာဖြစ်လို့လဲ ကျွန်တော့ကို ပြောင်းဖူးသကြားလုံး သွားဝယ်ပေးပါလား။ စားချင်လို့ ဒီမှာပြောင်းဖူး သကြားလုံးရှိတယ်လေ မရှိပါဘူး။ အမာစာပဲရှိတာ အပျော့စား စာချင်တာ ဟဲ..ငါတို့ဆိုင်မှာလည်း အပျော့စား တင်ရောင်းပါတယ်။ မရှိတော့ဘူး အစ်မရဲ့..ကဲ..သွားဝယ်ပေးပါဗျား။ ကိုယ့်မောင်ကို ချစ်ရင်။ နင်ကတော့လေ လိုချင်ရင် ဇွတ်ပဲ။ အောက်မှာလည်း အဒေါ်ဖြစ်သူက လေးဘက်ကုံးအနေအထားနဲ့ဖင်ကို ဆောက်ပေးတာမို့ ဖိုးဂျမ်းမျက်နာမှာ တစ်မျိုးကြီး တချက်တချက်ပုံပျက်နေသည်။ ဘာလို့လဲ မောင်လေး။ နင့်မျက်နာက မအီမသာနဲ့ ဘာမှမဟုတ်ဘူး မိမိ။ ပုရွက်ဆိတ်က ချက်တက်တက်ကို လာကိုက်လို့ ဖြစ်ရမယ် ငါ့မောင်က ကဲဗျား မြန်မြန်သွားစမ်းပါ အစ်မရဲ့ သွားပြီး သွားပြီး…တကတည်းမှာပဲ အစ်မဖြစ်သူသွားတော့မှ ဖိုးဂျမ်း ကိုယ့်အဒေါ်စပကို အနောက်ကနေ စက်သေနတ်သဖွတ် ကြမ်းသထက်ကြမ်းအောင် လိုးဆော်တော့သည်။ မမပြန်လာ အမှီလိုးခြင်းသာ သာ..မောင်ဂျမ်း ကြမ်းလှချည်လား မကြမ်းလို့ မရဘူး အရီး။ မိမိတို့ပြန်လာအမီ သားလိုးတာ သားကြမ်းပုံကလည်း ကိုယ့်အဒေါ်ကို ဖာသည်မလို လိုးနေသလိုပဲ။ အဲလိုဖြစ်သွားရင် ခွင့်လွတ်နော် အရီး အမယ်..မလိုပါဘူး။ နင့်အဒေါ်လည်း ဖာသည်မလိုဖြစ်နေပါပြီး။ ခုလို သားကြမ်းတာ အရီးကြိုက်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ အချက်ပေါင်းများစွာ တရစပ်လိုးဆော်တော့ မကြာခင်မှာ သုတ်ရည်များ အဒေါ်စောက်ဖုတ်ထဲသ်ို့ ပန်းထည့်ကာ နှစ်ယောက်လုံးရဲ့ ရမ္မက်ခရီး တဒင်္ဂလေးပြီးသွားသည်။ နောက်လည်း ကြုံရင်ကြုံသလို လို့ဖြင့်ခဲ့ကြတာမို့ ဒေါ်စန်းတင်ဟာ မိမိကိုယ်မိမိထိန်းကျောင်းတဲ့အနေနဲ့ တူတော်မမောင်ကို နိုင်ငံခြားသို့ပို့လိုက်သည်။ မသွားခင် နှစ်ရက်အလိုကတောင် တည်းခိုခန်း သွားပြီး တူဝရီးနှစ်ယောက် တ၀လိုးခဲ့ကြသေးသည်။
ပြီးတော့မှ ဖိုးဂျမ်းမှာ မဖြစ်မနေလိုမျိုး ဦးလေးနှစ်ဝမ်းကွဲဆီကို အလုပ်သွားရတော့သည်။ ဘာရယ်ကြောင့်များမသိ ဒေါ်စန်းတင်မှာ သူ့တူနိုင်ငံခြားရောက်သွားလို့ ဝေးသွားရင် ရမ္မက်စိတ်တွေပျောက်သွားမယ်ထင်တာ။ မှန်းချက်နဲ့နန်းထွက်မကိုက်တော့ပါ။ ပိုပိုပင်ဆိုးလာသည်။ တူတော်မောင်သွားတာ သုံးနှစ်ပြည့်တော့မယ်။ မိမိအသက်မှာလည် ၆၃နှစ်ဆိုတော့ ဒီရမ္မက်အတွက် ယောက်ျားယူလိုက်ရင်လည်း သူများပြောစရာတွေဖြစ်မှာဆိုတော့ လီးအတုဝယ်ပြီး တူရဲ့လီးလို့ သဘောထားကာ အာသာဖြေနေရတော့သည်။ သုံးနှစ်ပြည့်တော့ ဖိုးဂျမ်းဟာ အဒေါ်ဖြစ်သူတို့ကို မပြောဘဲ တိတ်လေးပြန်လာသည်။ ပြီးတော့ အဒေါ်ဆီကိုဖုန်းဆက်ချိန်းသည်။ အရင်တည်းခိုခန်းကိုလာဖို့။ ဒေါ်စန်းတင်မှာ တည်းခိုးခန်းမှ အခန်းတခန်းထဲသို့ ၀င်ကာ မတ်တပ်ရပ်ကာကြည့်နေတဲ့ တူလေးကို မြင်တော့ ကုတင်ပေါ်သို့ တွန်းလိုက်ပြီးတက်ခွလိုက်သည်။ ပြီးတာနဲ့ ဂျင်းဘောင်းဘီဇစ်ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီး တူလေးရဲ့လီးကို ထုတ်လိုက်သည်။ လီးကြီးထွက်လာမှ အံသြစွာနဲ့ မျက်လုံးပျူးသွားသည်။ ဖိုးဂျမ်းလီးက အရင်ထက်နှစ်ဆပိုကြီးပြီး ဂေါ်လီသုံးလုံးတောင်ထည့်ထားသည်။ သား..သား လီးက ပုံမှန်မဟုတ်တော့ဘူး ဘယ်ဟုတ်တော့မလဲ. ဒီလီးက လေ့ကျင့်ထားတဲ့လီး. ဝေးအောင်လုပ်တဲ့ အရီးရဲ့ စောက်ဖုတ်ကို ကွဲအောင် လိုးဖို့ပြန်လာတာ။ အမလေး…လိုးလိုက်စမ်းပါ သားရယ်။ အရီးအဖုတ် ကွဲချင်ကွဲပါစေဆိုပြီး တူရဲ့လီးကို ပါးစပ်ထဲထည့်လိုက်သည်။ ပါးစပ်မှာ မဆန့်မပြဲကြီး။ မဆန့်လည်း ပါးစပ်ကို အကျယ်ဆုံးဟပြီး တူဖြစ်သူကို လီးစုပ်ပေးသည်။ ဖိုးဂျမ်းမှာ အဒေါ်ဖြစ်သူကို ကြည့်ပြီး ပြုံးလျှက် ဒါမှ ဖိုးဂျမ်းရဲ့အဒေါ်ကွလို့ စိတ်ထဲပြောနေမိသည်။ ဒီလိုနဲ့ အဲဒီနေ့ တနေ့လုံး ဒေါ်စန်းတင်ပျောက်နေသည်။ အဓိပါယ်မှာ တနေ့လုံး တူတော်မောင်လိုးတာကို ခံလိုက်တာဖြစ်သည်။ နောက်နေ့ မိုးလင်းမှ သူ့တူနဲ့ ပြန်လာသည်။ ထိုနေ့ကစပြီး ၅နှစ်ကြာတဲ့ယခုအချိန်​ထိ အဆက်​မပြတ်​ လိုးဖြစ်ကြသည်။
ဖိုးဂျမ်းက ဆိုင်ထဲမှာအိပ်တတ်ပြီး အိမ်ထဲမှာတော့ အစ်မနှစ်ယောက်က တစ်ခန်း၊ အဒေါ်က တစ်ခန်းအိပ်ကြသည်။ ဖိုးဂျမ်ျးနထ အကောင့်သုံးရင်း စာရေးသူကို လာဟိုင်းသည်။ ဘော်ဒါက အင်းစက်လား။ အင်းဆိုတော့ ဘာနဲ့အင်းစက်ကြိုက်လဲ။ အမေနဲ့ဆိုကြိုက်တယ် လို့ပြန်ပြောတော့မှ သူက အဒေါ်နဲ့အင်းစက် တကယ်ဖြစ်နေတာလို့ ဖွင့်ဟလာတယ်။ စာရေးသူက အင်းစက်မှ ဖီလင်လာတာဆိုပေမယ့် အပြင်မှာတော့ အဲဒီစိတ်လုံးဝ မဖြစ်ပေါ်ကြောင်းပြောတော့ အနားမှာရှိတဲ့ အမေကို မှန်းထုခိုင်းတယ်။ တကယ်လည်း မေမေ့ကို လက်တွေ့မှာခံစားလို့ မရကြောင်း၊ စာရေးသူမှာ ကိုယ့်မေမေရဲ့ပုံပန်းသဏ္ဍန်ကိုကြိုက်သလို ပုံဖော်ရေးသားပြီးဖီးရင်ဖီး၊ အင်းစက်စာဖတ်ရင်ဖတ် မဟုတ်ရင် အင်းစက် ဗီဒီယို ကြည့်ပြီးမှန်းထုတာပါလို့ ရှင်းပြလိုက်တော့ ကျွန်တော့အကြောင်းကိုရေးပေးပါလားလို့ တောင်းဆိုလာတယ်။ ဒါနဲ့ သူ့ဖြစ်ပုံကိုမေးပြီး ခဏကြာတော့ ဘော်ဒါရေ..အရီးခေါ်နေပြီး ဟုတ်လား..အချိန်ကလည်းညနက်ပြီဟုတ်တယ်။ ကျွန်တော်သွားလိုက်ဦးမယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဒီလိုညဘက်ဆိုင်ထဲမှာ လိုးနေကျ။ အေး..လုပ်ကွား နှစ်ဦး သဘောတူလို့ကတော့ အရီးချွတ်နေပြီး နောက်မှတွေ့မယ် ဒါပဲ။ ဖိုးဂျမ်းအဒေါ်ဟာ ၆၈နှစ်ရှိပြီ ဒါပေမယ့် ဖိုးဂျမ်းပြောတာကတော့ အသက်ကြီးလေ လိုးလို့ကောင်းလေပဲတဲ့ ဒီလိုနဲ့ ယနေ့အချိန်အထိ ဖိုးဂျမ်းဟာ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ သွားလာစရာ မရှိရင် အဒေါ်နဲ့ မမြင်ကွယ်ရာမှာ အလိုးမပျက်တန်းရှိလေတော့သည်……ပြီး။